N'Enugwu, e ji ofufe nro Tọọsde dị asọ akwado Ista - BBC News Ìgbò
N'Enugwu, e ji ofufe nro Tọọsde dị asọ akwado Ista
Nkenke aha onyonyo Tọọsde dị asọ bụ emume ndị
Ndi ụka Katolik na-akpokwa ụbọchi tata, 'Chrism Mass', na bekee mgbe e ji agozi mmanụ nke ndị ụkọchukwu ji arụ ọrụ.
Na Holy Ghost Cathedral dị n' Ogui Enugwu, ndị ụkọchukwu na ndị ọzọ e chiri echichi n'ụka zukoro ọnụ n' ọgba ụlụka ahụ ebe onyeisi nchụ aja bụ Bishop Callistus Onaga duru ha na emume ikwenwo nkwa echichi ha.
N'okwuchukwu ya, Bishop Onaga bụ onye na-achịkọta Enugwu Diocese gwara ndị ụkọchukwu ka ha na- eso ukporo Kraistị dobere ndị echichi, nke gunyere umeala, ịhụnanya, inyere ndị mmadụ aka nakwa idobe iwu nke Chukwu ruo n' isi.
Ọ gwakwa ndị ụka ka ha kwụsị ịkpa oke agbụrụ n'ụlọụka.
Kirima gee ihe Ọnaga kwuru n'uju:
Media captionIhe Bishop Callistus Onaga gwara ndị ụkọchukwu na ndị ụka
Onaga nọkwa na ya bụ ofufe nro gọzie mmanụ Krizim e ji echi echichi n'ụka, nakwa mmanụ kathekumen e ji anabata ndị ọhụrụ n'ụka.
Etu esi mee ụka ọmụ taa
"Kwụsị njem ahụike"
'Israel na-emegide ụka Kraist'
Ndị mmadụ karịrị nari ise bụ ndị gbakọbara na ya bụ Holy Ghost Cathedral iji sonye mmemme 'Holy Thursday' bu otu na ihe a na-eme na izuụka dị asọ were kwadebe maka Ista.
Bishop Onaga chetakwara ndị mmadụ ka ha gaa weta akwụkwọ ntuliaka ha, n'ihi na ọ bụ ya ga-enye ha ọnụokwu na ihọta ezi onye ọchịchị.
Nkenke aha onyonyo Ụbọchị Tọọsde dị asọ bụ ụbọchị a na-echeta oriri ikpeazụ Kraist na ụmụazụ ya
Chelsea na Liverpool akụọla aka na 'tipa' bu kọnkịrị
Lee ka ị ga-esi ga mposi ọfụma na-achịghị nsị
Ndị katọrọ atụmatụ Peter Obi maka China amakụọla ya ugbua?